Sidee loo xidhaa dayactirka jijin caqli badan?
1. Nadiifi qalabka casriga ah. Si joogto ah u nadiifi curcuradaada iyo jijimooyinka caqliga leh, gaar ahaan jimicsiga ka dib, dhidid, ama taabashada maqaarka walxaha sida saabuunta ama saabuunta. Walxahaasi waxay ku dhegi karaan gudaha giraanta; Ha u isticmaalin saabuunta guriga lagu nadiifiyo jijimadda. Taabadalkeed, isticmaal sidaas ...
Muxuu yahay Jijimad Casri ah? Muxuu qabtaa Jijin Xariif ah?
Giraanta gacanta ee caqliga ahi waa aalad caqli badan oo la xidhan karo, isticmaalaha ka dib markuu xidho jijimado caqli badan oo wanaagsan, dadka isticmaala waxaa lagu duubi karaa jimicsiga giraanta gacanta ee nolol maalmeedka, sida cuntada iyo hurdada xogta waqtiga dhabta ah, waxayna sidoo kale noqon kartaa isku xirnaanta xogta moobaylka ama qalabka kombiyuutarka, ka dibna thr ...
Aaladaha casriga ah ee la qaadan karo ayaa keenaya xilli cusub oo maareyn caafimaad ah
Cudurka faafa wuxuu keenayaa baahi caafimaad, iyo suuqa la gashado oo bartilmaameedsanaya caafimaadka mustaqbalka Iyadoo la soo bandhigayo aaladaha casriga ah ee la gashado, fikradda maamulka caafimaadka ayaa dadweynuhu si aad ah ugu fiirsadeen. Sida laga soo xigtay daraasad ka socota Jaamacadda Stanford, xogta ay soo ururisay wearabl ...
Sida loo rakibo barnaamijka & isku xirnaanta Bluetooth
Fadlan ka raadi APP-ka Google Play-ka Android mobilada ama dukaanka APP ee iphone; Ama iskaan lambarka QR on smartwatch si aad u soo dejiso oo aad u rakibto APP. Fadlan si naxariis leh u xusuusnow in Android ay taageerto 4.4 iyo wixii ka sareeya; IOS waxay taageertaa 8.0 iyo wixii ka sareeya; Qalabka Bluetooh 4.0 iyo wixii ka sareeya. Xidhmada smartwatch, guji xulashada o ...
Shenzhen Anytec Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2015, Anytec waxay leedahay in ka badan 150 shaqaale ah, oo daboolaya aag ka badan 1500 oo mitir laba jibbaaran. Iyada oo leh afar xarig oo wax soo saar ah oo loogu talagalay soosaarida saacadaha casriga ah, iyo hal xarig oo wax lagu duubo, oo leh aqoon isweydaarsi heer sare ah oo heer sare ah oo 1000 ah ayaa ah soo saar, horumarin iyo iibin ku saabsan isdhexgalka shirkadaha tiknoolajiyada sare, badeecadeena oo ay ugu badan yihiin haweenka jijin caqli badan, GPS smart watch, ECG smart watch iyo bluetooth oo soo wacaya smart watch iwm.
hadday tahay 72